Agrarian & Environmental Justice (1341) Apply Agrarian & Environmental Justice filter
Alternativas Públicas (418) Apply Alternativas Públicas filter
Colombia in Focus (98) Apply Colombia in Focus filter
Corporate Power (531) Apply Corporate Power filter
Drogas y Democracia (1428) Apply Drogas y Democracia filter
Justicia Agraria y Ambiental (308) Apply Justicia Agraria y Ambiental filter
Myanmar in Focus (372) Apply Myanmar in Focus filter
Nueva Política (34) Apply Nueva Política filter
Poder Corporativo (244) Apply Poder Corporativo filter
Public Alternatives (818) Apply Public Alternatives filter
Trade & Investment (662) Apply Trade & Investment filter
Transnational Institute (54) Apply Transnational Institute filter
War & Pacification (1363) Apply War & Pacification filter
Drug Law Reform (968) Apply Drug Law Reform filter
Reforma de las leyes de drogas (881) Apply Reforma de las leyes de drogas filter
UN Drug Control (368) Apply UN Drug Control filter
Cannabis (288) Apply Cannabis filter
Harm reduction (202) Apply Harm reduction filter
Hoja de coca (162) Apply Hoja de coca filter
Guerra contra las drogas (130) Apply Guerra contra las drogas filter
War on Drugs (128) Apply War on Drugs filter
Human Rights & Drugs (127) Apply Human Rights & Drugs filter
Free Trade Agreements (FTAs) (124) Apply Free Trade Agreements (FTAs) filter
Ethnic Conflict in Myanmar (110) Apply Ethnic Conflict in Myanmar filter
Human rights to land, sea and food (110) Apply Human rights to land, sea and food filter
Alternative Development (93) Apply Alternative Development filter
Derechos humanos y drogas (85) Apply Derechos humanos y drogas filter
Justicia del Agua (76) Apply Justicia del Agua filter
Comercio (75) Apply Comercio filter
Myanmar Commentary (74) Apply Myanmar Commentary filter
စပိနျ (4549) Apply စပိနျ filter
ပွငျသဈ (91) Apply ပွငျသဈ filter
မွနျမာဘာသာ (63) Apply မွနျမာဘာသာ filter
ဂြာမာနျ (34) Apply ဂြာမာနျ filter
အင်ျဂလိပျဘာသာ (English) (14193) Apply အင်ျဂလိပျဘာသာ (English) filter
Article (9484) Apply Article filter
Event (760) Apply Event filter
Paper (164) Apply Paper filter
Policy briefing (53) Apply Policy briefing filter
Profile (3746) Apply Profile filter
Tema (10) Apply Tema filter
Global (57) Apply Global filter
Latin America and the Caribbean (362) Apply Latin America and the Caribbean filter
မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒရေးရာ သုံးသပ်ချက်များ စုစည်းမှု (33) Apply မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒရေးရာ သုံးသပ်ချက်များ စုစည်းမှု filter
Special Reports (25) Apply Special Reports filter
2020 (308) Apply 2020 filter
2015 (3459) Apply 2015 filter
2014 (718) Apply 2014 filter
2010 (1737) Apply 2010 filter
The Arab uprisingsadecade on: Egypt and Tunisia
05 ဖဖေျေါဝါရီလ 2021
This webinar is the first ofaseries - each withadifferent focus and angle -and will focus on Tunisia and Egypt, the birthplace of the magnificent revolts. The aim is to revisit these historical moments with some of the finest scholar-activists, participants and witnesses from those very contexts.
The Great Take Over: How we fight the Davos capture of global governance
26 ဇနျနဝါရီလ 2021
The post COVID-19 world presentsanew opportunity to deepen the corporate plans of capturing global governance and ensuring it serves the interests of corporate business and profits instead of putting in place policies for the wellbeing of humanity. It is urgent to unmask this global and systemic trend by showing how it operates in key sensitive sectors as well as taking the challenge to generate peoples power towards buildingastrong public and participatory governance foraworld beyond the health, climate, inequality and democracy crises. Is thereafuture for another multilateralism?
What can we learn from the world of pastoralism for wider agrarian struggles?
27 ဇနျနဝါရီလ 2021
The Agrarian Conversations series aims to address strategic and urgent issues in and in relation to the rural world today. The format is conversational: 15 minutes input from the main speaker, 15 minutes fromapanel of discussants, and 50 minutes open plenary (Q&A) discussion. A background paper is provided in advance to help facilitateaconversational format.
22 ဒီဇငျဘာလ အသုံးပွု စကားစု - လအမညျ အပွညျ့အစုံ 2020
New Politics Online Conference 2021
11 ဇနျနဝါရီလ 2021
Democratic Socialism in Global Perspective
The 2020 General Election in Myanmar: A Time for Ethnic Reflection
The 2020 general election was one of disappointment for ethnic nationality parties in Myanmar. Prior to the polls, expectations were high that they would winalarger number of seats than in previous elections. In the event, the National League for Democracy won another landslide victory. NLD gains were largely at the expense of the military-backed Union Solidarity and Development Party. The position of ethnic parties, in contrast, will remain relatively the same.
The 2020 General Election in Myanmar: A Time for Ethnic Reflection(pdf, 749.1 ကီလိုဘိုကျ)
16 ဒီဇငျဘာလ အသုံးပွု စကားစု - လအမညျ အပွညျ့အစုံ 2020
ကိုလိုနီခေတ်အလွန် မြန်မာနိုင်ငံကျရှုံးမှုများ၏ ပုံရိပ်က အာရကန်မြေဟု သမိုင်းတွင်ခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ထင်ဟပ်နေပေသည်။ လူမျိုးစု ပဋိပက္ခများ၊ နိုင်ငံရေး ညှပ်ပူးညှပ်ပိတ် အခြေအနေ၊ စစ်ဘောင်ချဲ့လာခြင်း၊ ဒေသစီးပွားရေးကို လျစ်လျူရှုခဲ့ခြင်းများနှင့် ဌာနေလူထုကို ဖယ်ကျဉ် ဆက်ဆံခဲ့ခြင်းများ ရှိနေသော ရခိုင်ပြည်နယ်သည် မြန်မာပြည်လိုပင်။ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်များတွင် ထိုပြဿနာများ၏ အတိုင်းအဆ ပိုမိုပြင်းထန်လာကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်မွတ်ဆလင်တို့အကြား စိတ်ဝမ်းကွဲမှု ပိုမိုဆိုးရွားလာပြီး ခေတ်သစ် ကမ္ဘာ၏ အကြီးမားဆုံး ဒုက္ခသည်ပြဿနာကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။ လူသားအရင်းအမြစ်နှင့် သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်တို့ဖြင့် အသေအချာ အလားအလာရှိသည့် ဒေသတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း အာရကန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင်းရဲဆုံး ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အာရကန် (ရခိုင်ပြည်နယ်) - မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက်ဒေသမှ ပဋိပက္ခမြေ(pdf, 29.34 မီကာဘိုကျ)
Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier(pdf, 9.06 မီကာဘိုကျ)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုနိုင်ငံရေး နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ
15 ဒီဇငျဘာလ အသုံးပွု စကားစု - လအမညျ အပွညျ့အစုံ 2020
ရာစုနှစ် တစ်ဝက်ကျော်ကြာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှ မြန်မာနိုင်ငံ အသွင်ကူးပြောင်းချိန် အကျပ် အတည်းကာလတစ်ခုတွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို လုပ်ဆောင်ရန် စီစဉ်ထားလျက် ရှိသည်။
Myanmar: Ethnic Politics and the 2020 General Election_26-09-20(pdf, 1.66 မီကာဘိုကျ)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုနိုင်ငံရေး နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ(pdf, 2.12 မီကာဘိုကျ)
Busting the myths around the Energy Charter Treaty
Fabian Flues, Pia Eberhardt, Cecilia Olivet
Amidst growing concerns that the Energy Charter Treaty (ECT) undermines urgent climate action, andagrowing backlash against the treaty, its profiteers are spewing propaganda, promoting falsehoods about how the ECT attracts clean investment and how its 'modernisation' will fix any flaws. Cut through their rhetoric with our new myth-busting guide.
Busting the myths around the Energy Charter Treaty: A guide for concerned citizens, activists, journalists and policymakers(pdf, 3.24 မီကာဘိုကျ)
မြန်မာနိုင်ငံ ဖက်ဒရယ် မြေစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ဆီသို့ မျှော်မှန်းချက် ခြေလှမ်းများ
11 ဒီဇငျဘာလ အသုံးပွု စကားစု - လအမညျ အပွညျ့အစုံ 2020
ကယားပြည်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကွန်ရက်မှညှိုနှိုင်းရေးမှူး စောအယ်စေး သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြေဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများအား မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ Human Rights Tulip ဆု အား ရရှိခဲ့ကြောင်း နယ်သာလန်နိုင်ငံသံရုံးမှ ယမန်နေ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ လူ့အခွင့်အရေး ကျူးလစ်ပန်းဆု(Human Rights Tulip) သည် ထူးချွန်ကာ ရဲစွမ်း သတ္တိရှိသောလူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများအတွက် ဒတ်ခ်ျအစိုးရ မှနှစ်စဉ် ချီးမြှင့်သော ဆု တစ်ခု ဖြစ်သည်။
လွှမ်းခြုံမှုရှိသည့်မြေဥပဒေတစ်ရပ်အတွက် ဒို့မြေကွန်ရက်၏ ရပ်တည်ချက်(pdf, 161.64 ကီလိုဘိုကျ)
အနာဂတ်မြေယာအုပ်ချုပ်စီမံမှုတစ်ရပ်ဆီသို့ “အပိုင်း (၂)” (pdf, 297.62 ကီလိုဘိုကျ)
Visions towardafederal land governance system in Myanmar
Yesterday, on International Human Rights Day, the Embassy of the Kingdom of the Netherlands announced that Saw Eh Say, the coordinator from the Kayah Earthrights Action Network (KEAN), received the 2020 Human Rights Tulip Myanmar Award for his great efforts to promote the right to land in Myanmar. The Human Rights Tulip is an annual award of the Dutch government for outstanding and courageous human rights defenders.
LIOH’s Position Paper for an Umbrella Land Law(pdf, 203.67 ကီလိုဘိုကျ)
Towardafuture land governance system (KEAN’s Analysis)(pdf, 124.25 ကီလိုဘိုကျ)
O Futuro é Público
Edição brasileira publicada pelo Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicasepela FENAE - Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal,mediante autorização do Transnational Institute. (Brazilian edition published by the National Committee for the Defense of Public Enterprises and by FENAE - National Federation of Personnel Associations of Caixa Econômica Federal, with authorization from the Transnational Institute.)
O Futuro é Público(pdf, 5.79 မီကာဘိုကျ)
Muslim Women don’t need saving
10 ဒီဇငျဘာလ အသုံးပွု စကားစု - လအမညျ အပွညျ့အစုံ 2020
Upon declaringaGlobal War on Terror in 2001, the US administration claimed that the “fight against terrorism was alsoafight for the rights and dignity of women”. In the years that followed, western political discourse regularly referred to the need to “free” apparently oppressed Muslim women from the shackles of their religion and way of life, reviving political and societal debates about head coverings, integration, gender equality, secularism, and neutrality.
Relying on Islamophobic stereotypes, and with no regard for the rights to freedom of expression or freedom of religion, laws and policies were introduced inanumber of European countries, which banned the hijab and/ or niqab. In perhaps the most flagrent example of just how entrenched Islamophobia has become, European states, in effect, began legislating on Muslim women’s bodies, dictating which clothes they could or could not wear.
Muslim Women don't need saving: Gendered Islamophobia in Europe(pdf, 292.01 ကီလိုဘိုကျ)
“ကျွန်မတို့ကို လူသားထဲက လူသားအဖြစ် နေထိုင်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါ။” - အမျိုးသမီး မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူတစ်ဦး၏ ရင်တွင်းစကားသံ
08 ဒီဇငျဘာလ အသုံးပွု စကားစု - လအမညျ အပွညျ့အစုံ 2020
ယခု ဆောငျးပါးမှာ နိုဝငျဘာလ (၂၅) ရကျနမှေ့ ဒီဇငျဘာလ (၁၀) ရကျနအေ့ထိ ကရြောကျသော “အမြိုးသမီးမြား အကွမျးဖကျမှုရပျတနျ့ရေး ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာလှုပျရှားမှု” ကို ဂုဏျပွုသောအားဖွငျ့ ရေးသားခွငျးဖွဈသညျ။ ယခုနှဈတှငျ ဤလှုပျရှားမှုကို မူးယဈဆေးဝါး မူဝါဒပွောငျးလဲခွငျး ထောကျခံဆှေးနှေးရေးအဖှဲ့ (မွနျမာ) (Drug Policy Advocacy Group – DPAG) က လိငျလုပျငနျးဖွငျ့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျး ပွုနသေော အမြိုးသမီးမြား၊ HIVနှငျ့ အသကျရှငျနထေိုငျသူ အမြိုးသမီးမြား၊ မိနျးမကဲ့သို့ ဝတျစားဆငျယငျ ပွုမူနထေိုငျသူမြား(Transgender)၊ အမြိုးသမီး မူးယဈဆေးဝါး သုံးစှဲသူမြားဖွငျ့ ပေါငျးစညျး၍ ပါဝငျခဲ့သညျ။ ကြှနျပျတို့၏ အဓိကရညျရှယျခကျြမှာ လူ့အသိုငျးအဝိုငျးအတှငျး ခှဲခွားပွဈတငျ၊ ဖိနှိပျခြုပျခွယျခွငျး ခံစားနရေသညျ့ အမြိုးသမီးမြားအပျေါ အကွမျးဖကျမှု လြော့နညျးပပြောကျ စရေနျဖွဈသညျ။ ထိုဆယျရကျတာ လှုပျရှားမှုကို DPAG မှဦးဆောငျ၍ မိတျဖကျအဖှဲ့အစညျးမြားဖွဈသော တျောဝငျခရကှေနျရကျ (SWIM)၊ HIVနှငျ့ အသကျရှငျနထေိုငျသူ အမြိုးသမီးမြားကှနျရကျ (MPWN)၊ မွနျမာလူငယျကွယျပှငျ့မြားကှနျရကျ (MYS)၊ Transnational Institute (TNI) တို့က တကျကွှစှာ ပူးပေါငျးပါဝငျကွသညျ။ လှုပျရှားမှုအသေးစိတျ ပုံရိပျမြားကို သိလိုပါက DPAG မကျြနှာစာအုပျဖွဈသော https://www.facebook.com/Drug-Policy-Advocacy-Group-Myanmar-995656970513733 တှငျ ကွညျ့ရှုနိုငျပါသညျ။
Deep and comprehensive dependency
Layla Riahi, Hamza Hamouchene
Tunisia has undergone radical changes in the past decade, and faces more in the years to come, if the EU has its way. As the first country to topple its dictator in early 2011, it set offachain of revolutions across North Africa and West Asia that led toapolitical reconfiguration, the impacts of which are still playing out. While Tunisia is often seen as the ‘success’ story of the ‘Arab Spring’, the transition has actually beenalot more complex than that.
Deep and Comprehensive Dependency: Howatrade agreement with the EU could devastate the Tunisian economy(pdf, 5.49 မီကာဘိုကျ)
‘Treat us like human beings’ - Life story ofawoman who uses drugs in Myanmar
07 ဒီဇငျဘာလ အသုံးပွု စကားစု - လအမညျ အပွညျ့အစုံ 2020
This commentary is part of the ten-day global campaign to end violence against women, in which the Drug Policy Advocacy Group – Myanmar (DPAG) also participates together with partners in Myanmar, including female sex workers, women living with HIV, and transgender people. DPAG’s campaign focuses on ending violence against women, including women who use drugs and other women facing intersecting inequalities. The campaign is coordinated by DPAG, and supported by the Sex Worker Network in Myanmar (SWIM), Myanmar Positive Women Network, Myanmar Youth Stars, and the Transnational Institute (TNI). For more information see DPAG’s Facebook page.
09 ဒီဇငျဘာလ အသုံးပွု စကားစု - လအမညျ အပွညျ့အစုံ 2020
The Biden Presidency: A New Era, oraFragile Interregnum?
Hewing to its centrist instincts will beadisaster for the Biden administration. The left must seize the initiative.